Umlando kaJuan Carlos Onetti | Izincwadi Zamanje
UPepe Aedo | | Abalobi, eziningana
UJuan Carlos Onetti wazalwa ngoJulayi 1, 1909 ku Montevideo.
Igama likayise kwakungu UCarlos Onetti nonina UHonoria ubopha (we BBorges yombhali wase-Argentina), wayenomfowethu osekhulile nodadewabo omncane. Ebusheni bakhe, wasebenza emisebenzini eyahlukahlukene ukuze aphile, iningi lalingahlobene nezincwadi. Washada nomzala wakhe kwathi kungakapheli neminyaka embalwa wahlukanisa washada nomunye umzala wakhe (omncane).
Kepha akukho kulokhu kuvela emsebenzini wakhe, noma ngamanye amazwi, konke lokho kuvela emsebenzini wakhe kodwa ngendlela eyinkimbinkimbi futhi esetshenzisiwe kabusha yokuthi akunakwenzeka ukuhlukanisa izehlakalo zangempela namaphupho.
Waphila impilo empunga phakathi Montevideo y Buenos Aires kodwa wasungula umuzi obizwa ngokuthi Santa María aduma ngakho.
Kusukela emshadweni wakhe wokuqala indodana yakhe yazalwa UJorge Onetti Onetti Borges. Kusuka emshadweni wakhe wesithathu, nge U-Elizabeth Maria Pekelharing, yazalwa indodakazi yakho U-Isabel Maria (Litti).
Ngo-1950 washicilela Impilo emfishane, umsebenzi wobungcweti esingase singaze siziqonde ngokugcwele.
U-Onethi ungumbhali (njengakwabaculi abathandwa cishe ngabaculi abathile kuphela) owaziswa kuphela idlanzana labafundi. Kuningi ukucabanga okungenziwa ngalokhu, kepha ngale kwalezo zibonakaliso, ukuthandwa okuphansi kwe- U-Onethi kuyiqiniso elingokoqobo.
e 1955 U-Onethi washada no UDorotea Muhr, owayeseceleni kwakhe kwaze kwaba sekugcineni.
Emsebenzini wakhe, okulandelayo kugqama: El pozo (1939), La vida breve (1950), Los adioses (1954), The shipyard (1961), Isihogo esesabekayo nezinye izindaba (1962), Juntacadáveres (1964) , Vumela umoya (1979).
Ngo-1975, ngenxa yobushiqela obabusungulwe ku Uruguay, U-Onethi waya ekudingisweni e Madrid, lapho ayehlala khona eminyakeni yokugcina yokuphila kwakhe, cishe ngaphandle kokuvuka embhedeni ...
Ngo-1980 wathola lo mklomelo CervantesKusukela lapho kuqhubeke wathola ukwamukelwa kwamanye amazwe.
Ngo-1993 washicilela inoveli yakhe yokugcina Lapho akusenandaba.
Wadlula emhlabeni ngoMeyi 30, 1994. Singathemba nje ukuthi okusalokhu kungashicilelwe kuhlala ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Umlando kaJuan Carlos Onetti
Ngicela ufake imithombo othole kuyo imininingwane? Kungukucaphuna umbhalo wakho emsebenzini waseyunivesithi. Uma unazo, ngiyabonga ukuthi uzithumela ngeposi ku- gracielilla92@hotmail.com